Ny Tilikambon'i Londres | Vaovao momba ny dia
Ny tilikambon'i Londres
Mariela Carril | | Londres, Inona no ho hita
Iray amin'ireo toerana malaza indrindra eto an-drenivohitra UK dia ny Tilikambon'i Londres. Rehefa miverina eto amin'izao tontolo izao ity fizahan-tany ity dia ho feno mpitsidika indray ity tilikambo ity, fa mandritra izany fotoana izany dia afaka mahafantatra zavatra momba ny tantarany isika.
Ny Tilikambo, araka ny fantatra fotsiny, dia misy dikany lehibe eo amin'ny tantara. Rehefa nandeha ny fotoana dia samy hafa ny asany ary miaraka amin'izy ireo ny fihetseham-po isan-karazany amin'ny mponina ao Londres. Andao ho fantarintsika ny tantarany sy izay harena sarobidy tazoniny.
2 Tsidiho ny Tower of London
tilikambo dia eo amoron'ny renirano Thames, amin'ny morontsiraka avaratra, ao amin'ny borough nataon'i Tower Hamlets. Ny tantarany nanomboka tamin'ny taona 1066 rehefa ny malaza William ilay Mpandresy nanomboka nanorina manda tamin'ny tranokala hifehy ny mponina ao an-toerana ary hifehezana ny fidirana amin'ny seranan-tsambon'ny tanàna.
Ny firafitra afovoany dia fantatra amin'ny anarana hoe White Tower ary nitsangana 1078, ao anatin'ny rindrin'ny Romanina taloha ary namboarina tamin'ny vatosokay namboarina avy any Normandy. Taonjato maro taorian'izay nitarina ireo rafitra fiarovana ireo any an-dafin'ny rindrina sy ny White Tower dia nanjary fon'ny rafitra lehibe mifantoka amin'ny fiarovana izy io.
La rindrina anatiny Tamin'izany fotoana izany dia nanana tilikambo 13 izy, manodidina ny White Tower. Anisan'izany ny iray malaza indrindra, ny Bloody Tower, na dia malaza aza ny Wakefield sy Beauchamp. Avy eo dia nisy ny rindrina ivelany voahodidin'ny hady nomen'i Thames hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX.
Ary nisy rindrina hafa koa teo ivelan'ny moat izay nisy basy sy tafondro maoderina taty aoriana. Ny marina dia ny hetsi-tany iray manontolo dia nibata fito hektara ary ny fidirana tany tokana dia teo amin'ny zorony atsimo andrefan'ny tanàna. Tamin'izany fotoana izany ny renirano no zotra be mpampiasa indrindra ka ny vavahadin-drano no be mpandeha indrindra. Natao Batisa ity varavarana ity Vavahadin'ny mpamadika satria nandalo izany ny voafonja teny amin'ny làlana mankamin'ny fonja izay niasa tao amin'ny White Tower.
Nanomboka tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nipetraka tao ny tilikambo Royal menageriesatria fonenan'ny mpanjaka hatramin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Araka ny fantatry ny maro tamin'ny Moyen Age dia tranomaizina sy toerana famonoana ho faty ny gadra politika. Na izany aza, ny ankamaroan'ny voafonja voaheloka ho faty dia novonoina tao amin'ilay antsoina hoe Green Tower, ivelan'ny lapa, na amin'ny Tower Hill fa tsy eo.
Ny tena malaza novonoina dia Anne Boleyn tamin'ny 1536, vadin'i Henry VIII, Jane Gray sy ny vadiny na Sir Simon Burley, mpanolotsaina sy mpampianatra an'i Ricardo I, ankoatry ny maro hafa. Ny sasany nanana vintana tsara kokoa ary gadra fotsiny, toa an'i Elizabeth I na Sir Walter Raleigh. Amin'ny vanim-potoana maoderina kokoa, ohatra tamin'ny Ady Lehibe I, nisy mpitsikilo novonoina ho faty.
Mandra-pahatongan'ny taona 90, ny Firavaka satro-boninahitra, ao amin'ny tany ambanin'ny tany misy ny Trano firavaka, fa taty aoriana dia nankany amin'ny rihana ambonimbony kokoa izy ireo izay ankasitrahana kokoa. Tao anatin'izay folo taona izay dia betsaka ihany koa ny asa fanarenana, indrindra amin'ireo sehatra antonony kokoa, toy ny tilikambon'i Saint Thomas. Hatramin'ny 1988 ny trano mimanda taloha dia Lova manerantany notendren'ny UNESCO.
Tsidiho ny Tower of London
ankehitriny ao amin'ny tilikambo dia misy tobin'ny miaramila, miaraka amin'ny governora monina ao amin'ny tranon'ny Mpanjakavavy taonjato faha-XNUMX ao amin'ny Green Tower. Ity governora ity no miandraikitra ny mpiambina, ny beefeater iza, tsara tarehy, mbola mitafy a Fanamiana ny fotoana Tudor ary monina ao anatin'ny tilikambo izy ireo. Izy ireo no mitarika ireo mpitsidika, olona roa ka hatramin'ny telo tapitrisa isan-taona.
Ny anarana marina ho an'ireo olona ireo na mpiambina tilikambo ofisialy dia Mpiambina Yeoman y Efa nisy izy ireo hatramin'ny nananganana ilay tilikambo tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Raha ny marina dia heverina ho iray amin'ireo varotra tranainy indrindra eto an-tany izy io. Tamin'ny andro taloha dia nanampy ny voafonja izy ireo ary nampijaly azy ireo raha ilaina izany. Ankehitriny dia tsy dia mahery setra intsony ny asany lasa mpahay tantara sy mpitari-dalana mpizaha tany, fa raha te hahatratra ny toerana dia tsy maintsy nanompo 22 taona farafahakeliny tao amin'ny Tafika Britanika na Tafika an-dranomasina na Royal Air Force izy ireo ary nahatratra laharana iray.
Vantany vao voafantina, ny mpiambina rehetra dia miaina miaraka amin'ny fianakaviany ao anatin'ny tilikambo. Misy mpiambina vehivavy ve? Eny, nanomboka tamin'ny 2007. Raha mandeha ianao isan'andro dia ho hitanao izy ireo miakanjo ny akanjo marevaka manga sy mena, fa raha mandeha amin'ny fotoan-dehibe ofisialy ianao dia ho hitanao izy ireo manao ilay akanjo Tudor amin'ny volamena sy mena.
Hatreto dia miaraka amin'ny tantaran'ny Tower of London. Rehefa resy ity areti-mandoza mahatsiravina ity dia hijanona eo miandry ny famerenana ilay fiainana very miaraka amin'ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao i Londres. Ka tsara ny fahalalana izany Ny Tower dia manana ora samihafa arakaraka ny fotoan'ny taona. Ohatra, ny ora fitsitsiana antoandro (hatramin'ny 31 oktobra) dia ny talata ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary ny alahady sy alatsinainy manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5:30 hariva. Manam-potoana hidirana ianao raha tsy amin'ny 5 ora hariva.
Soa ihany afaka mividy ny tapakila amin'ny Internet ianao ary miantoka ny fitsidihana. Ny vidin'ny tapakila isaky ny olon-dehibe dia 28 pounds, efa ho 33 euro. Ankizy mandoa 14 pounds. Rehefa tafiditra ao anaty, inona no hitanao? La White Tower, izay ny Tower malaza any Londres, trano afovoany sy antitra indrindra ao an-tanàna; ireo mponina malaza amin'ny tilikambo iray, ny goaika, fa araka ny angano rehefa tsy eo intsony izy ireo dia mirodana ny tilikambo ary miaraka aminy, mazava ho azy, Angletera, ary izany no mahatonga ny tompon'ny goaika iray, mijery azy ireo foana.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Lapan'ny medieval, mametraka, izay misy fanaka taloha ao anatiny izay ahafahantsika mahita ny fomba niainany taonjato maro lasa izay, na farafaharatsiny ny fomba niainan'ny andriana.
Misy koa ny Royal Chapel an'ny San Pedro sy Vincula, izay nanomboka ny 1520, ary misy ny taolan'ny gadra malaza sasany ary novonoina ho faty. Mbola miasa ihany koa ny trano fiangonana ho an'ny fianakavian'ny mpiambina izay mipetraka ao amin'ilay toerana. Ary farany, ny Firavaka satro-boninahitra Izy ireo koa dia tsy maintsy jerena satria ho hitanao sabatra, satro-boninahitra na tehina mitafy vato sarobidy ary voakilasy tantara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Ny tilikambon'i Londres
Inona no ho hita any San Sebastián